Saraakiil Katirsan Shabaabul Mujaahidiin Oo Kulan laqaatay Waxgaradka Deegaanka Baxdo Ee Gobolka Galguduud.
Thursday May 10, 2018 - 10:59:08 in Wararka by Super Admin
Wararka ka imaanaya bartamaha dalka Soomaaliya ayaa sheegaya in dhaq dhaqaaq ciidan laga dareemay deegaan hoos yimaad magaalada Cadaado oo xarun u ah maamulka isku magacaabay 'Galmudug'.
Sawir hore deegaanja baxdo
Shalay gelinkii dambe waxaa deegaanka Baxdo gaaray ciidamo aad ufarabadan iyo saraakiil katirsan Xarakada Shabaabul Mujaahidiin, Al Shabaab iyagoona si nabad gelya ah kula wareegay gacan ku heynta deegaanka oo ay isaga firxadeen maleeshiyaad katirsanaa maamulka Galmudug.
Ilo wareedyo ayaa xaqiijinaya in saraakiisha Al Shabaab iyo waxgaradka deegaanka ay yeesheen kulan ballaaran oo lagu gorfeynayay xaaladda gobolka Galguduud iyo kaalinta shacabku ka qaadan karaan dagaalka lagula jiro ciidamada shisheeye.
Soo dhoweyn heer sare ah ayay dadka deegaanka Baxdo usameeyeen ciidamada Al Shabaab arrinkaas oo ka yaabiyay maamulka isku magacaabay Galmudug.
Masjid Jaamaca deegaanka Baxdo ayay saraakiisha ciidamada Al Shabaab shacabka kula hadleen waxayna ugu baaqeen in ay isdajiyaan oo ay gacan ka geystaan baahinta wilaayada islaamiga Galguduud si ku dhaqanka shareecada islaamka loo gaarsiiyo dhammaan gobollada dhaca bartamaha dalka Soomaaliya.
Deegaanka Baxdo ayaa qiyaastii 90 KM dhanka Bari uga beegan magaalada Cadaado ee gobolka Galguduud waana deegaan hareerihiisa uu kuyaal dhul ku wanaagsan daaqsinka xoolaha.
Wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in ciidamada Al Shabaab ay dib uga gurteen deegaanka Baxdo waxaana kusoo laabtay maleeshiyaad taabacsan maamulka fadhigiisu yahay magaalada Cadaado.